Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Ciyaartoyda Kubadda Cagta Denmark Sheekada Carruurnimada ee Kasper Schmeichel iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada buuxda ee Legend Legend oo loogu magac daray naaneyska “Daneyntii Weyn". Sheekadeena Carruurnimo ee Kasper Schmeichel oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography Xaqiiqooyinka ayaa kuu keenaya xisaab buuxa oo ah dhacdooyin caan ah laga soo bilaabo waqtigiisa carruurnimada ilaa taariikhda.
Nolosha iyo Sareynta Kasper Schmeichel. Sawirka Sawirka: Cagta CagtaTopTen, DailyMail, Twitter iyo Pinterest
Falanqaynta / socodka waxay ku lug leedahay noloshiisii ​​hore / asalka qoyskiisa, waxbarashadiisa / mustaqbalkiisa shaqo, noloshiisi hore, waddo caannimo, kacaan sheeko caan ah, nolosha xiriirka, nolosha shaqsiyan, xaqiiqooyinka qoyskiisa, qaab nololeedkiisa iyo xaqiiqooyinka kale ee aad looga yaqaan ee ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu yahay wiilkii hore ee Manchester United iyo halyeeyga reer Denmark Peter Schmeichel. Si kastaba ha noqotee, kaliya dad yar ayaa tixgeliya Kasper Schmeichel's Biography kaas oo aad u xiiso badan. Hadda bilaa camal dheeraad ah, aan bilawno.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Asalka Qoyska iyo Nolosha Hore
Kasper Peter Schmeichel wuxuu ku dhashay Maalinta 5 ee 5 November 1986 hooyadiis Bente Schmeichel (Guri Guri) iyo aabe Peter Peter Schmeichel (Goolhayaha Legendary) ee ku yaal magaalada Kobanheegan, Denmark. La kulan Kasper Schmeichel waalidkiis hoosta.
La kulan Kasper Schmeichel Waalidkiis- Peter iyo Bente. Astaanta Sawirka: BilledBladet
Asalka qoyska Kasper iyada oo loo marayo awoowgiis (muusig deenish ah) Qoyskiisa asal ahaan ka soo jeeda Poland iyo MAYA Denmark taas oo taageerayaal badan oo kubadda cagta ah loo adeegsado. Ma ogeyd?… Awowgiis awoowe oo ku magac dheer Tolek Schmeichel ayaa u soo guuray Danmark qiyaastii 1960. Awowgii Kasper (Tolek) wuxuu ahaa cunug dagaal oo lahaa aabihiis (Kasper awoowe-weyn) loo dilay askariga Polish ah intii lagu jiray Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Awowgiisii ​​weynaa oo askari noqday wuxuu macnaheedu yahay in qoyska Kasper Schmeichel ay leeyihiin Saldhig Militari.
Tolek (Kasper Awowgiisa) wuxuu ka tagay Poland kuna soo jeeday Danmark halkaas oo naagtiisii ​​ku dhasheen oo uu ku barbaaray wiilkiisii ​​Legendary Peter Schmeichel. Awooddani maskaxeed ee ceyriinka ah ee xididdada qoyska milatariga, ee loo yaqaan 'jimicsiga jirka' ayaa loo beddelay Peter Schmeichel oo u adeegsaday inuu magac ku sameeyo kubada cagta ka dibna ku wareejiyo gen wiilkiisa uu jecel yahay Kasper.
Legendary Peter Schmeichel wuxuu ahaa 22 markii xaaskiisa Bente ay dhashey Kasper, taasoo ka dhigtay inuu aabbe noqdo markii ugu horeysay. Kasper yar sida hoos lagu arkay wuxuu ku noolaa nolol hodan maxaa yeelay aabihiis caan buu ahaa. Wuxuu ahaa caruur waalidkood awood u lahaa awoodi karaan aruurinta cusub ee alaabta carruurtu ku ciyaarto. Kasper keligiis ma koray, laakiin Waxaa weheliya walaashiis oo magaceedu yahay Cecilie Schmeichel. Hoos waxaa ku yaal sawirka qoyska qurxoon inta lagu gudajiray horraantii 1990's.
Sawirka Kasper Schmeichel Qoyska inta lagu gudajiray horraantii 1990s. Sawir-amaahdaDrDk
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Dhismaha Xirfadaha iyo Waxbarashada
Go'aanka Horey loo Go’aamiyay: Fiidnimadii xagaaga quruxda badan ee 1991 ka hor inta uusan ku soo biirin United, aabihii Kasper, Peter Schmeichel wuxuu ku sugnaa guriga kooxdiisu kubbadda cagta (Brøndby IF) oo u dabaaldegayey sannadkiisii ​​shanaad ee horyaalka deenishka. Wuxuu go'aansaday inuu sameeyo xaflad yar, isagoo ku casuumay martidiisa oo intooda badani ay ahaayeen taageerayaasha kooxda.
Maaddaama taageerayaasha lagu casuumay isla markaana ay aadayaan xafladda, ayaa wiil KasNUM Schmeichel oo 4 sano jir ahi istaagay albaabka hortiisa isagoo wejigiisu go'an yahay isagoo u sheegaya martida,Dhammaantiin halkaan ma geli kartaan!”…….“Haa, waa nala ogolaaday, aabahaa ayaa na martiqaadayMidkood ayaa ku jawaabey markii uu si tartiib ah dib ugu soo celiyey Kasper hooyadiis, taasoo u oggolaanaysa taageerayaasheeda inay soo galaan. Xisbigu wuu socday oo toddobaadyo yar ka dib, Peter Schmeichel wuxuu sii waday mustaqbalkiisa guuleed ee Manchester United.
Ugu dhakhso badan qaar ka mid ah 25 sanadood ka dib, Kasper lama arkin isagoo taagan wadada martida - BILAAHAN markan, dariiqa nooc kasta oo ka mid ah kooxaha ka soo horjeeda kubada cagta oo ujeedadoodu tahay inay kubada gadaal ka dhigaan. Bal aan haddaba kuu siino sheeko gaaban oo ku saabsan sida safarku u bilaabmay.
Maxaa ku kallifay inuu raacdo tabaha Aabihiis: Da'da 7 & 8, sanadka 1992 iyo 1993, Kasper aabihiis Peter waxaa loo doortay Goolhayaha ugu Fiican Adduunka ee IFFHS. Lahaanshaha aabe oo ahaa Ma aha kaliya goolhayaha ugu fiican adduunka, laakiin mid ka mid ah kuwa horyaal horyaal ah la qaaday Manchester United, way fududahay da’yarta Kasper inuu raacdo tabaha aabihiis.
Guushii hore ee xirfadeed ee Peter ee Kasper waxay ku dhiirigelisay inuu raaco raadkiisa. Sawir-amaahda ScandinavianTraveler, Iyo XIUMX
Kasper wuxuu ku qaatay waqtigiisa caruurnimada badankiis kuna raaxeysto guusha xirfadiisa aabihiis. Wuxuu ku bilaabay dugsiga Ingriiska sababta oo ah aabihiis xirfadiisa ciyaareed. Kasper wuxuu ku qaatay waxbarashadiisa dugsiga hoose Hulme Hall Grammer School oo ku yaal Greater Manchester. Wuxuu u hibeeyay ciyaaraha xitaa markii uu akhriyay buugaagtiisa. Xiligaas inta lagu gudajiray xilliga iskuulka, Kaper wuxuu la ciyaaray kubado goolhaye asxaabtiisa oo kamid ahaa Alex Bruce- wiilka uu dhalay aabaha Kasper aabihii hore ee kooxda Manchester United Steve Bruce.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Mudnaanta Hore
In kasta oo ciyaartooyda kale ee kubada cagta ay shaqadooda bilaabaan iyagoo ku biiraya akadeemiyada kubbadda cagta, Kasper wuxuu ku bilaabay shaxdiisa aabihiis. Maamulka Manchester United ayaa u ogolaaday inuu raaco aabihiis halyeeyada si uu tababarka u qaato. Goor hore, wuxuu jeclaa inuu istaago goolka dambe halka Manchester halyeeyada ay tareen. Kasper wuxuu ku ordi lahaa inuu soo qaado darbo dariiqa iska tuuray oo goolka qasaariyey ka dibna u gudbi doonta inuu ka qeyb galo ciyaar kasta oo ka dhacda garoonka caanka ah ee Old Trafford.
Aabaha Kasper Schmeichel ayaa ku soo afjaray waayihiisa Manchester United rikoor sarre ka dib markii uu ku hogaamiyay United inay ku guuleysato 1999 Treble. Markii uu jiray 36, Peter wuxuu raadsaday xawaare tartiib tartiib tartiib ah oo kubada cagta Portugal (Sporting CP), horumarin ay ku arkeen dhammaan qoyska Schmeichel oo ay ku jiraan Kasper yar oo ka tagaya England kuna aaday Portugal.
Sannadkii 2000, intii Kasper uu la noolaa waalidkiis Portugal, wuxuu isku qaatay iskuul xirfadeedka kubada cagta ee Estoril oo caan ku ah Grupo Desportivo Estoril. Intii uu ku jiray dugsiga akadeemiyadda, Kasper wuxuu sii waday inuu raaco raadadkii aabihiis. Inta badan ka dib casharrada tababarka, wuxuu aadi lahaa casharo dheeraad ah oo aabihiis ka helayo Sporting CP. Tani waxay dhacday sanadka oo dhan 1999 ilaa 2001.
Kasper Schmeichel wuxuu aabihiis ka bartay aabihiis inta lagu gudajiray maalmihiisii ​​hore ee meherada. Sawir-amaahda m80
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Waddada loogu talagalay sheekada
Laba sano kadib Portugal, qoyska Schmeichel waxay dareemeen in la joogo waqtigii la sii joogi lahaa wadanka. Mar labaad, Kasper wuxuu go'aansaday inuu ka tago kooxda waqtigan, ka dib markii aabihiis ku laabtay England halkaas oo uu ka bilaabay inuu u ciyaaro Aston Villa. Kasper ayaa la saxeexay Man magaalada oo bilooyin ka dib, wuxuu dib ula midoobay aabihiis, markan isla kooxdii. Ma ogeyd?… Labada aabbe iyo wiilkoodba waxay sameeyeen taariikh iyaga oo noqday goolhayeyaashii ugu horreeyay ee u ciyaara kooxda akadeemiga Man City iyo kooxda waa weyn sannadka 2002.
Sawir naadir ah oo Kasper Schmeichel uu la yimid aabihiis Peter markii labadoodaba ay u wada ciyaareen kooxda Man City sanadkii 2002. Astaanta Sawirka: TheGuardian
Markay Awoodda Go Go adag u tahay Kasper: Maaddaama uusan u bislaanin qalin-jabinta akadeemiyada, Kasper si fudud uma buuxin karo kabaha aabihiis isla markiiba ka dib markii uu ka fariistay City iyo kubbadda cagta ee sanadka 2003. Isaga oo aan sugi karin, City waxay sii wadatay iibsashada David James oo buuxiyay booska Peter Schmeichel.
Ka dib qalin-jabinta kubbadda cagta ee dhallinyarada, Kasper oo u maleynayay inuu si habsami leh u tegi doono kubbadda cagta ma uusan arkin wax u socda isaga sidii loo qorsheeyay. Waqtigaas, meesha loogu talagalay booska gool-haye sare waa ay qaadan jireen Joe Hart kaasoo si isdaba joog ah u socday oo loo arkayay inaan la bedeli karin. Horumarkan ayaa khalkhal geliyay Kasper oo jahwareer galay.
The Kasper Schmeichel- Joe Hart Rivalry. Astaanta Sawirka: PlanetFootball. Dhibcaha: PlanetFootball
Ka dib markii ay gaareen guulo aad u badan sannadihii la soo dhaafay, way ku adkeyd qoyska Schmeichel inay la macaamilaan sidii ay u arki lahaayeen wixii iyaga u gaar ah oo hoos u dhaca kala soocaya Eastlands. Iyada oo raadineysa xulashooyinka, Kasper Schmeichel wuxuu bilaabay inuu ku safro abeesooyin kaladuwan iyo jaranjarada si loogu aqoonsado inuu yahay goolhaye kooxda koowaad. Wuxuu ku bixiyay khidmadiisa isagoo si amaah ah uga socda 2006 ilaa 2009 oo uu ku bilaabayo waayihiisa ciyaareed si dhaqso leh Xeerka, Falkirk iyo Notts County iyo Leeds.
Badbaadiyaha ayaa ugu dambeyntii u yimid inuu badbaadiyo Kasper. Markan, ma ahayn aabihiis super, laakiin maamulaha Notts County, Sven-Göran Eriksson ayaa ka caawiyay inuu helo door goolhaye koowaad kooxda Leicester. Wuxuu xaqiijiyey Kasper, oo ah goolhaye daacad u ah 27th ee Juun 2011.
Sven Goran Eriksson wuxuu Kasper Schmeichel ka caawiyay inuu booskiisa Leicester sugo ka dib markii labada nin ay si wada jir ah uga wada shaqeeyeen gobolka Notts County. Sawir-amaahda DailyMail
Ma ogeyd?… Waxay ahayd Sven-Göran Eriksson oo maamuli jiray Ivory Coast Koobkii Adduunka ee 2010 FIFA.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Kusoo sharax sheekada
Kasper Schmeichel wuxuu dib ugu soo celiyay fadligiisa madaxiisa isaga oo siiyay 17 go'yaal nadiif ah isla markaana badbaadiyay afar rigoore guud ahaan ciyaaraha 52. Bandhigiisii ​​xilli ciyaareedkii 2011 – 12 wuxuu ku kasbaday abaalmarinta naadiga sanadka iyo abaalmarinta ciyaartoyga sanadka.
Halkii uu ka dhaqaaqi lahaa lacag aad u fara badan, Kasper wuxuu go’aansaday inuu ka caawiyo Leicester sidii ay caan ku ahayd kubada cagta Ingiriiska. Xilligii 2013 – 14, sagaalkiisa shaashad oo nadiif ah iyo 19-kulan oo aan laga badin ayaa socodsiiyay laga soo bilaabo Disember ilaa Abril waxay ka caawiyeen dammaanadda Leicester hor u qaadista ugu sarreysa ee horyaalka iyadoo lix kulan ay u harsan tahay.
Maalinta ugu weyn ee Dane ayaa timid 2nd ee May 2016, markii uu ka caawiyay kooxdiisu inay ku guuleysato horyaalnimada Premier League sannadihii 29. Ma ogeyd?… Waxay ahayd isla da'daas iyo maalin taariikhi ah isla maalintaas Kasper aabihiis wuxuu ku guuleystay Man United horyaalkeedii ugu horreeyay ee Horyaal ee 1993.
Kasper wuxuu ku guuleystey Horyaalka Premier League markii uu jiray 29 sano, isla da'daas iyo maalinta kale ee taariikheed markii aabihiis uu ku guuleystay cinwaano la mid ah 1993. Astaanta Sawirka: Instagram iyo Twitter.
Isagoo abuuraya rikoor adduunka ah, Schmeichels wuxuu noqday aabaha kaliya ee dhalay iyo wiilka ku guuleysta Premier League sidoo kale isku meel ayuu ku jiraa inuu sidaas sameeyo. Waqtigii qorista, Kasper wuxuu kaliya ka dhigtay aabihiis xitaa sharaf, madaama uusan wax gool ah ka dhalin kooxdiisu guuldaradii 0-9 ee ka soo gaartay Southampton maalintii 25th ee October 2019.
Kasper Schmeichel ayaa laga dhaliyay yoolalka 0 ee burburinta 0-9 ee Southampton. Sawir-amaahda Independent iyo SkySports
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Xiriirka
Waxaa ka dambeeyay goolhayaha guuleysta ee Peter, waxaa jiray wiil Kasper ah. Iyo qalbiga Kasper, waxaa yimid Jacaylka samee gabar qurxoon oo mar indhaha ka duubtay ka hor intaysan noqon gabar saaxiibo ah sanadka 2004. Stine Gyldenbrand waa haweeney deenish ah oo ku dhalatay Jan 1985, taasoo la micno ah inay ku dhowdahay 2 sano inay ka weynaato Kasper. Waxay kacday stardom markii ay biloowday shukaansiga Kasper inta lagu gudajiray sanadkii ugu dambeeyay ee meeshiisii ​​shaqo ee 2004, waqtigaas, Kasper wuxuu jiray kaliya 17 sano.
Kasper Schmeichel wuxuu bilaabay shukaansiga Stine Gyldenbrand markii uu jiray 17. Sawirka Amaahda- boha-byli
Maalintii quruxda badneyd ee ay la kulmaan, Stine Gyldenbrand waxay hadda noqotay arday ka diiwaangashan inuu shahaadada koowaad ee jaamacadda umulisooyinka ku dhigo Jaamacadda Chester. Ka dib markay qalin jabisay 2009, waxay bilowday inay ka shaqeyso isbitaal u dhow Birmingham iyo sanad ka dib (2010), labada gacaliyayaashu way soo dhoweeyeen cunuggoodii ugu horreeyay, wiil ay u magacowday Max Schmeichel. Laba sano ka dib (2012), waxay lahaayeen Isabella Schmeichel.
La kulan Kasper Schmeichel xaaskiisa, Stine Gyldenbrand wiilkiisa, Max Schmeichel iyo gabadhiisa, Isabella Schmeichel. Sawirka Deynta-Pinterest
Kasper wuxuu taariikhiyay saaxiibtiis iyo hooyadeed carruurtiisa muddo xNUMX sano ah ka hor inta uusan go’aansan inuu soo jeediyo oo uu uxir xirto iyada. Labada caashaq waxay guursadeen 11 at the caan Kaniisadda Egebæksvang Kirke kuna yaal magaaladooda Danmark. Munaasabadda ayaa waxaa ka qaybgalay dhammaan xubnaha qoyska.
Kasper Schmeichel ayaa la sawiran isaga iyo xaaskiisa maalinta arooskooda. Sawir-amaahda Baomoi
Tan iyo guurkoodii ka dib, Stine waxay sii wadday waxbarashadeeda. Waxay dhowaan dhammaysay waxbarashadeedii sidii tabobar shaqsiyeed si ay u horuumariso aqoonta caawinta dumarka uurka leh iyo dhalmada ka dib si ay u helaan nolol caafimaad leh. Sida wakhtigii qorista, Stine wuxuu hada maamulaa labo aasaasi oo la magac baxay; The Gyldenbrand Schmeichel Foundation iyo fodboldfonden iyada iyo ninkeeda iyo saaxiibkeed, Christine Kvist.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Naftaada Shaqsiga
Inaad ogaatid Kasper Schmeichel Xaqiiqda Nolosha Shaqsiyadeed ee garoonka dhexdiisa waxay kaa caawineysaa inaad hesho sawir wanaagsan oo ku saabsan shaqsigiisa.
In la barto Kasper Schmeichel Nolosha Shaqsiyadeed ee ka baxsan-Pitch. Sawir-amaahda Twitter
Bilaabidda, Kasper waa qof karti badan, geesi ah oo jecel. Isagu waa hogaamiye dhab ah oo heegan u ah waxa uu ku qabto garoonka dhexdiisa iyo dibaddiisa. Kasper wuxuu awoodaa inuu si sahal ah ula qabsado dhaqammada kala duwan ee bini aadamka gaar ahaan baaritaanka bulshada ee ku saabsan isbarbar dhigida aabihiis. Sida laga soo xigtay Guardian,
“In nolosha la raadsado sidii goolhaye ahaan ma ahayn hawlgalka ugu fudud. Xitaa hadda, shisheeyayaashu waxay la yimaadaan waxoogaa caqli gal ah oo ku saabsan sida aanan waligey u fiicnaan doonin sida asalka ah oo aabbahay yahay. In la xukumo sidan oo kale waa wax aan isku dayay inaan la noolaado sida ugu macquulsan ee suurtagal ah.
Ahaanshaha nin isagu, leh awoodiisa, jihiisa, qaabkiisa, hamigiisa gaarka ah waa waxa Kasper rabay.
In kasta oo ay ahayd 32 (xilligii qorista) oo ay lahayeen laba carruur ah, dadku weli waxay u arkaan Kasper inuu yahay wiilka 'someones'. Si kastaba ha noqotee, wuxuu wali rumeysan yahay inay jiraan taageerayaal badan oo jecel qadiyadiisa cajiibka ah ee aan sameynin hadalo aan wanaagsaneyn ama kaftan ah.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Nolosha Qoyska
Qoyska Schmeichel waa mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ee qoysaska deenishka ee ku nool Boqortooyada Ingiriiska. Waa qoys yar oo leh awooda nukliyeerka ee udub dhexaadka caannimada kubada cagta. Xubin kasta oo ka mid ah reerka Schmeichel waa afkooda hooyo ee kuhadlida labada luqadood ee Deenishka iyo Ingiriiska (lahjada Waqooyiga-Ingiriisiga).
Xubnaha Qoyska Kasper Schmeichel oo u dabaaldegaya hanashada horyaalnimadiisa Premier League. Sawir-amaahda Mirror
Ku saabsan Kasper Schmeichel Aabaha: Sidii aan horayba u soo sheegnay, Peter Schmeichel wuxuu ahaa goolhayaha ugu fiican adduunka iyo taariikhda horyaalka ugu fiican sida la arkay mudadii uu joogay Manchester United. Butros wuxuu ku noolaa Rabbiga Sir Alex Ferguson waagii dahabiga ahaa ee Manchester United. Naanaysta 'weyn ee deenishka', wuxuu caan ku ahaa timahiisa timaha, qaab dhismeedka weyn iyo qaabka goolhaye aan dhameystirneyn.
Waxaa la yaab leh, ina Schmeichel ina Kasper wuxuu arkay naftiisa oo dhaxlaya qaabkii aabihiis iyo in yar oo ka mid ah qaabkiisii ​​weynaa sida lagu arkay hoosta. Labada aabbe iyo wiilku way is ixtiraamaan, wayna diidaan isbarbardhiga bulshada ee naftooda.
Ciyaarta Aabaha Peter iyo ina Kasper - Labaduba runtii waa Legends. Muuqaalka Amaahda- scandinaviantraveler
Peter Schmeichel waqtiga qorista waxaa laga soocayaa xaaskiisii ​​hore Bente (Kasper hooyadeed) waxa loogu yeeray go’aan adag oo labada lamaane ah. Qiyaastii Juunyo 2019, Peter Schmeichel wuxuu guursaday astaamihi hore Pl * yboy- Laura von Lindholm ka dib shil gaagaaban oo ka dhacay Espergærde, Denmark. Hooyada Kasper Schmeichel, oo leh magaca Von Lindholm waa khabiir ku xeel dheer arrimaha nafaqada iyo jilaa. Wax yar lama garanayo sababta Peter Schmeichel uu u furay xaaskiisa.
Kasper Schmeichel aabihiis Aroos. Sawir-amaahda TheSun iyo DailyMail
Ku saabsan Kasper Schmeichel hooyadiis: Bente Schmeichel waxaa la siiyay amaan weyn habka ay u maareysay ninkeeda iyo gurigeeda gaar ahaan markii uu ugu sarreeyay awoodaha gooldhalinta. Si ka duwan ninkeeda iyo wiilkeeda, iyadu waxay ku dhaqaaqday ikhtiyaar mihiim ah inaadan raadsan aqoonsi dowladeed. Si kastaba ha noqotee, xukumaya sawirka hoose (markii Kasper uu ku guuleystey abaalmarinta sanadka ee kooxda '2016 Danish Player Player of the Year'), hooyada super ayaa mar dhaweyd munaasabada, iyadoo muujineysa sida ay ugu faraxsan tahay guusha wiilkeeda.
Hooyooyinka Kasper Schmeichel waxay aad ugu faraxsanyihiin guulaha wiilkeeda. Astaanta Sawirka: BT iyo BilledBladet
Ku saabsan Kasper Schmeichel Walaasha: Cecilie Schmeichel oo dhammaantood koray ayaa ku dhaca inuu noqdo walaalka keliya ee Kasper, oo aan lahayn walaal (yada) iyo walaasha (yada). Thanks to aabbaheeda aabe halyeeyada ah iyo walaalkeed weyn (oo lagu sawiray hoosta hoose), Cecilie aad ayey ugu faraxsan tahay inay dhaliso magaca Schmeichel.
La kulan Kasper Schmeichel Sister- Cecilie Pilkær Schmeichel. Astaanta Sawirka: Instagram
Isaga oo ka hadlaya magaceeda caanka ah iyo nolosha guurka, waxay mar tidhi;
“Aniga oo leh magac caan ah oo iga danbeeya, waxaan had iyo jeer haystaa nolosha raaxada nolosha caanka ah. Hadda oo aan guursaday oo aan hadda cagahayga ku istaago, waxaan ku noolahay nolol caadi ah dhanka nolosha kale.
Cecilie wuxuu hadda guursaday labo caruur ah (Nuux iyo Sofie) oo hadda waxaa la dhahaa Cecilie Pilkær Schmeichel. Iyaga oo ka xukumaya jagada ay ka haysato maareheeda Social Media, waxay umuuqataa inay tahay nafaqo-yaqaan, blogger iyo tababar jimicsi.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - nololeedka
Qaadashada mushaharka sanadlaha ah ee sanadkii € 7,800,000 (Warbixinta WTFoot), waa cadaalad in la yiraahdo Kasper wuxuu sameeyaa lacago fara badan, oo ah mid ku filan inuu isaga ku noolaado nolol qurux badan. Noloshiisa gaarka ah ee sida tooska ah ugu xidhan wax qabadkiisa kubada cagta ayaa si fudud looga dareemi karaa gaariga uu ka daganyahay Mercedes.
Gawaaridii Kasper Schmeichel- Wuxuu wade ka ahaa Mercedes sida 2017. Sawir-amaahda DailyMail
Sawirka kore kaas oo shaaca ka qaadaya gaari qalaad, Goolhayaha reer Denmark ayaa aabihiis u kaxaystay qolka qadada ee maqaayadda San Carlo Italian si uu ugu dabaaldego guushii ay kooxdiisu ka gaadhay Sevilla.
Sheekada Carruurnimada Kasper Schmeichel Oo Lagu daray Xaqiiqda Taariikh Nololeedka ee Untold - Xaqiiqooyin aan sax ahayn
Gool-goonidiisa gaarka ah: Precision waa adeeg bixiyaha UK ee No.1 ee qalabka tababarka isboortiga. Shirkadda waxay si dhaw ula shaqeysay Kasper si ay u soosaarto galoofisyo kala geddisan oo isagu uu ugu magacdaray 'Gacmo gashiga Schmeichology'. Darajooyinkan matrixiga ah iyo guluubyada gacmeed ee caadiga ah waxaa horay u isticmaali jiray dhowr goolhayeyaal ah oo ka ciyaara Kubadda Cagta.
Gacan gashiyada 'precision Schmeichology galoofyada' waxaa loo magacaabay Schmeichel Family. Dhibcaha Muuqaalka: Ka HortaggaTraining
Maamulayaasha Wiilka iyo Aabbaha: Kasper oo ah 32 waqtiga qorista wuxuu leeyahay macluumaad aad u tiro badan oo xogtiisa kujira CV-ga sida ku cad boggiisa Wikipedia. Markaan si taxaddar leh u eegno shaqsiyaadka iyo naadiyada sharafta leh, ma jiro ciyaar marka loo eego isbarbar dhigaya guulaha uu ka gaarey taariikhiisii ​​aabihiis oo shaashadda sharafta sidoo kale lagu muujiyey hoosta.
Maamulayaasha Kasper Schmeichel. Astaanta Sawirka: Independent
Peter Schmeichel kaas oo ahaa 32 sano jir ah (oo la mid ah wiilkiisa) xilligiisii ​​1994 / 1995 wuxuu horeyba u soo maray si aad u badan shaqadiisa. Qoraalkiisa Wikipedia wuxuu sharraxayaa sababta uu ugu tixgeliyo abaalmarinnada kubbadda cagta, iyo sidoo kale asxaabtii hore iyo kuwa hadda joogaba mid ka mid ah goolhayeyaasha ugu weyn taariikhda kubadda cagta adduunka.
Peter Schmeichel Shakhsiyaadka iyo Sharafta Naadiga. Sawir-amaahda SportsJoe
Tattoolaha Kasper Schmeichel: Qof isboorti ahaan, marka ay timaaddo inaad hesho tattoo-gaaga koowaad, waxay macno u leedahay in qofku doonayo wax aad u yar, tattoo ah oo si fudud looga qarin karo qaraabada qaarkiis oo doonaya inuu kugu barayo saacado saacadaha la soo sheegay. Tani waxay noqon kartaa kiiska Kasper. Sida hoos ku xusan, wuxuu leeyahay tattoo qarsoon oo ku yaal hal dhinac gacantiisa kore taas oo ay adag tahay in la arko.
Kasper Schmeichel Tattoo. Astaanta Sawirka: WTFoot
Hantida FACT: Waad ku mahadsan tahay akhriskayaga sheekada Carper Kasme Schmeichel oo lagu daray Xaqiiqda Untold Biography. Ugu LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxsanaan iyo cadaalad. Haddii aad hesho wax aan sax ahayn, fadlan nala wadaag adigoo faallo ka bixinaya xagga hoose. Waxaan markasta qiimeyn doonnaa oo xushmeyneynaa fikradahaaga.